गर्मीमा यसकारण लगाउनुस् सनग्लास !! | सुदुरपश्चिम खबर
जाडोको तुलनामा गर्मीमा परावैजनी किरण तीन गुणा बढी हुन्छ। यसैले गर्मी सुरु हुनेबित्तिकै सनग्लासको आवश्यकता महसुस हुन्छ। चर्को घाममा हुने अल्ट्राभायोलेट किरणले आँखामा असर पु¥याउँछ। विना सनग्लास घाममा निस्कँदा आँखा पोल्ने, आँशु आउने, रिङगटा लाग्नेजस्ता समस्या हुन्छ। त्यसैले गर्मीमा गगल्स फेसन मात्र होइन, आँखाको स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। किन चाहिन्छ सनग्लास, पढ्नुहोस् ।
चर्को घाममा त्यत्तिकै निस्कँदा परावैजनी किरणले आँखामा बन्ने टियर सेल अर्थात् आँसुको कोशिका टुट्न सक्छ र यो कर्नियाका लागि हानिकारक हुन सक्छ। अर्थात् परावैजनी किरणले रेटिनामा असर पु¥याएजस्तै कर्नियामा पनि असर पु¥याउँछ।
सनग्लास किन्दा विशेषगरी दुई कुरामा ध्यान दिनुहोला। एउटा चश्माको साइज र अर्को गुणस्तर। अर्थात् चश्मा परावैजनी किरणबाट सुरक्षा दिने खालको हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा, चश्मामा स्क्र्याच वा धमिलोपना नआउन्जेलसम्ममात्र प्रयोग गर्नुहोला। सिसाको रंग पनि आँखालाई सुरक्षा दिने खालको मात्र छान्नुहोस्। घटिया लेन्सले आँखालाई असरमात्र गर्न सक्छ। (सेतीकाली न्युज बाट सभार)
हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !! आज निकै शुभ छ यी ७ राशिको भाग्य, कुन हो तपाईको राशी ?